Motummaan wayyaanee yo kufee namni isaa boyuu tokkolleen hin jiru jedhu keysa beytonni haala motummaa wayyaane . – Welcome to bilisummaa
Motummaan wayyaanee yo kufee namni isaa boyuu tokkolleen hin jiru jedhu keysa beytonni haala motummaa wayyaane .
Barreyfama armaan gadii kana keysatti Qunnamtii Motummaa ethiopia fi biyyota ollaa isii jiddu jirtu waliin yaalu yaalla hordoffiin keysan nu waliin haa tahu !!
Motummaan ethiopia qunnamtiin isiin biyyota ollaa isii waliin qabdu hammaataa dhufaa jira.
Gara biyya ollaa ishee Sodaan wayta dhufnu motummaan wayyaanee embaassii Afrikaa keysaa ittiin guddaa magaalaa kharxuum keysaa qabaatullee motummaa Umer Al-bashiir irraa amanttii dhabudhaan humna nagenya isaa baayyinaan Seraan ala biyya san keysatti ramaduudhaan lammillee Oromo fi lammilee biraallee goluu keysatti argamaa.
Gara daangaatiin naannon Qadaarifi fi baadiyyaan isii waraana shiftaa wayyaaneen weraramtee lafti km 45 geysu waraana kana jalatti kuftee jiraachuu isii misenssonni caffee mana marii Sudaan ifaan ifaatti dubbatanii jiru.
Haala kanaan misenssonni mana marii Sodaan ministera biyya keysaa waammatuudhaan lafti waraana wayyaanetiin dhunffatamte jirtu debi’uu qabdi waraanni Sudaan daangaa biyya lameenii jiddutti ramadamee ummataa fi lafa Sudaan kabajasiisuu qaba jechuu misenssonni kunneen ministerichatti dirqama laatanii jiraachuun isaanii hubatamaadha.
Gara biyya kenyaa wayta debinu ammo waraanni wayyaane guyyaa guyyaan ji’a ji’aan daangaa biyya sanii qaxxaamuraa jiraachuun isii hubatamaadha.
Waan fetees balleysaa waan fetees saamaa ka barbaadde ajjesaa ka barbaadde bojiyaa , kana hunda waraana bilisummaa Oromo WBO barbaanna jechuudhaan daangaa biyya kenyaa heeraan ala qaxxaamuraa oluun kuni motummaa keniyaa hedduu dallanssisee motummota gamtomanitti himachuuf qophii xumurataa jiraachuun isii gabaafamee jira.
Gara biyya Somaalee wayta debinuu biyyi Somasle motummaa jiddu galeysaa dhabuun isaanii motummaan wayyaane biyya Somaaleetiif motummaa jiddu galeysaa taateefii taliga wali-galaa biyya Somaalee dhunffattee jiraachuun motummaan wayyaanee kuni ummata Somaalee hunda mormitota motummaa kanaa godhee jira.
Gara biyya ertirea wayta dhufnu ammo qunnamtii fi diinummaan isaan jiddu jiru wal-nama hin gaafachiisu ,
Gara biyya masrii wayta dhufnu ammo bishaan rabbiin akka ummanni hedduun ittiin jiraatuuf umee irratti kurii fi hidha guddaa ummattota ollaa kanneen gaaga’amaa guddaa irraan geyuf jaaraa jiraachuun isii ummata masrii fi motummaa isii waliin diinummaa guddaa horattee jiraachuun isii hubatamaadhaa.
Inumaa biyyota ollaa tarkaanffatanii biyyonni akka Sa’udi arabiyaa fi UEA/Dubai illeen shira motummaa wayyaane kana jalaa baraaramuu hin dandenye.
“Nama Dubbi barbaadu manni isaa daandii keysaa ja’aa miti ree ”
Oromon wayta maakmaamu.
Haala kanaan motummaan Sa’udi fi Emaaraat buufata donii asab ertireatti argamutti fayyadamuun Isaanii maalif barbaachise jechuudhaan motummota biyya lamaanii kallattii hundaan balaaleyfachaa jiraachuun motummaa wayyaanee wayta dhageyametti motummaan sa’udi fi emaaraat gar malee dallanssisee jira.
Gara Sodaan kibbaa wayta dhufnu ammo 2011 kaasee hamma guyyaa arraatti motummaa sudaan kibbaa fi mormitota isii jidduu galuudhaan biyya Sodaan kibbaa nagayaa fi tasgabbii dhorgaa jiraachuun motummaa wayyaanee ragaa firaa fi dinni isilleen itti ragaa bahaa jiru.
Keysa beytonni haala sirnicha kanaa motummaan wayyaanee kuni yo arra kufellee namni isaaf boyuu tokkolleen akka hin jirre dubbataa jiru.
Oromo / Ethiopa
Previous Habroo Magaalaa Waaccuu: Ummata irraa Ulee, Mancaa, Shukkaa ykn Cuubee fii Meeshaa Waraanaa kan tahe kamiyyuu irraa guuraa jiran
Next ‪#‎OromoProtests‬ Adama University, January 4, 2016